'आर यु अ स्टिल भर्जिन'?बिहेको त्यो पहिलो रात...पूरा पढ्नुहोस् |
September 22, 2021 adminLeaveaComment on ‘आर यु अ स्टिल भर्जिन’?बिहेको त्यो पहिलो रात…पूरा पढ्नुहोस्
गत असार महीनाको कुरा हो । जतिबेला बिहेको सिजन थियो । मेरो एकजना साथीले पहिल्यैदेखि मन पराइरहेको एउटा केटीसँग कुरा अगाडि बढेको जानकारी दिंदै थियो । त्यसैक्रममा एकदिन च्याटमा साथीको म्यासेज आयो ‘हामी त आज केटी माग्न जान लागेको यार ।’मैले उत्तर दिएँ- ‘केटी कुनै वस्तु हो र माग्न जानलाई?’ शायद गहिराइको भाव उसले बुझेन र ठट्यौली पारामा जवाफ दियो- ‘ल बढी प्रगतिशील हुने काम नगर्ने।’
त्यो दिनको च्याट त्यहीं रोकियो । त्यसपछि उसले बिहे गर्यो । दुलही भित्र्यायो । अनि फोटोहरु पनि पोस्ट्यायो फेसबुकका भित्ताहरूमा । टाढा थिएँ । जान सकिनँ र त मैले पनि वैवाहिक जीवनको शुभकामना भन्दै कमेन्ट गर्दिएँ ।तर धेरैपछि आजकल मलाई केटी माग्न जाने परम्परामा घोत्लिन मन लागेको छ । यो मात्र होइन, बिहेअघिको प्रेम र बिहेपछिको प्रेममा समेत केही लेख्न मन लागेको छ ।
बिहेअघि केटी भर्जिन छ वा छैन भनेर प्रश्न गर्नु, बिहेअघि केटीका सम्बन्धहरू कति जना केटासँग थिए भनेर खोजीनिती गर्नु, बिहेअघि केटी हेर्न जानु, अनि शरीरका अंगदेखि लिएर कपाल, छालाको रङ, उँचाइ, दुब्लो-पातलो, कम्मर हिपदेखि लिएर हिंड्ने चालसम्म मध्यनजर गरेर नापतौल गर्नु- के यी सबै वस्तुपरक चीज होइनन् र ? के केटीहरूको शरीर कर्पोरेट हाउसको विज्ञापन गर्ने होर्डिङ बोर्ड हो र ? बिहेमा, सम्बन्ध यसरी नै गाँसिन्छ र?
आर यु अ स्टिल भर्जिन?’ यो प्रश्न एउटा विवाहित पुरुषले बिहेको पहिलो रात आफ्नी श्रीमतीलाई किन सोध्छ होला? सबैले नसोध्लान् तर अधिकांशमा यो मनोवृत्ति रहन्छ भन्दा फरक नपर्ला ।के पुरुषहरूले चाहिं बिहेअघि जे गरे नि हुने अनि नारीहरू चैं ‘ओहो मेरो बिहे भाको छैन’ भन्दै डर मानेर बस्नुपर्ने हो र? भर्जिनिटी पुरुष र महिला दुवैका लागि एउटै परिभाषा भए पनि बिहेअघि केटा कति जनासँग यौन सम्बन्धमा थियो भन्दा पनि केटी चाहिं कति जनासँग यौन सम्बन्धमा थिई भन्ने कुरामा समाज जिज्ञासु बन्ने गर्छ । यो विडम्बनालाई आज चिरेरै छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।
केटाहरू आफूबीच अलिकति खुल्ला भएर बिहेको बारेमा गफ गरिरहँदा उनीहरू भन्ने गर्छन्, ‘केटी जे पढोस् जतिसुकै सम्पत्तिको हकदार होस् तर भर्जिन चाहिं चाहिन्छ ।’ उनीहरू कर्म र योग्यतामा जे सुकै दाग होस् तर कुमारीत्वमा दाग नहोस् भन्ने चाहन्छन् । यस्तै यस्तै कथनमा निहित हुन्छन् उनीहरूका ननभेज जोक्स पनि ।
जहाँ योनीलाई सुरक्षित राख्न कबज जडान गर्ने डरपोक श्रीमानका हर्कतहरू पनि समेटिन्छन् । गर्लफ्रेन्डको कुमारीत्व जाँच गर्न उसले पहिलो समागममा निकाल्ने आवाजलाई आधार मान्ने ब्वाइफ्रेन्डका सोचहरू पनि समेटिन्छन् । कुमारीत्व परीक्षण गर्न सुहागरातमा सेतो तन्ना ओछ्याएर भोलिपल्ट सासूले तन्ना ओल्टाइपल्टाइ हेरेका दृश्यहरू समेत अचेल फिल्ममा देखिन्छन् ।
आखिर यी सबै योनीलाई सूचक मानेर नारी जाति माथि नै गरिएका अत्याचारका उदाहरणहरू हुन् जो अहिलेको समाजमा पनि जीवित छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखाउँछ । नारीहरूलाई वस्तु जस्तै सस्तो बनाएर कमजोर बनाउने खेल पनि हो ।म एउटा मेडिकलको विद्यार्थी हुँ । पेशाले चिकित्सक छु । नारीलाई जननीको रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले पनि नारीमा गर्भाशय, योनी र स्तन जस्ता अङ्ग हुनु एउटा सामान्य शरीर रचना अन्तर्गत पर्दछ ।
तर सृष्टिकर्ताका रूपमा हेरिने नारीका यी अङ्गहरू नै वस्तुपरक कारण बन्दछन् । नारीका लागि वरदान सावित यी अङ्गहरू हिंसाग्रस्त पुरुषका लागि खेलौना बन्दछ । यो कस्तो नियति ? साँच्चै एउटा आमाले छोरी जन्माउँदा गर्व गर्ने दिन कहिले आउँछ ?ओठमा लगाउने लिपिस्टिक, सिउँदोमा लगाउने सिन्दुर, अनुहारमा लगाउने पाउडर, कपाल सिल्की बनाउने स्याम्पु-कन्डिसनर, नङमा लगाउने पालिस, शरीर सुगन्धित बनाउने अत्तर अनि स्तन र योनी छोप्ने भित्री वस्त्रहरू पो सबै वस्तु हुन्छन् त तर ओठ, अनुहार, कपाल, नङ, स्तन, योनी अनि पूरै शरीर कसरी वस्तु हुनसक्छ र ?
प्रेमीले वा श्रीमानले चाहँदैमा शरीर स्लिम बनाउनुपर्ने, कपाल सिल्की बनाउनुपर्ने यो सबै के जबरजस्ती हुँदैन र ? के पुरुषले चाहँदैमा सर्लक्क पातलो हुनलाई नारीको शरीर रोटी हो र ? के यसमा नारीको कुनै चाहनाले महत्व राख्दैन र ?गोरो छाला भएन भने त कसैले हेर्दै नहेर्ने भए । केटाहरूले प्रेम प्रस्ताव नै नराख्ने भए । जति नै पढे पनि कुरूपको दर्जा भिराएर कसैले बिहे नगर्ने भए ।’ के तपाईं पनि यस्तै हविगत भोगेर निराश हुनुभएको छ ? आजदेखि ऐना हेर्न बन्द गर्दिनुस् । चाया पोतो आयो अनि छाला फुस्रो भयो भनेर कति दिग्दारी मानेर बस्नुहुन्छ ? तपाईं मोटी हुनु के तपाईंको कमजोरी हो र ? हाइट सानो भएर होची हुनु तपाईंको पूर्वजन्मको पाप हो र ? यी सब छोड्दिनुस् । आफ्नो क्षमतामा काबु राख्नुस् । कति चाहिं तपाईंले मात्र सहने ?
छोडिदिनुस् धाउन डाक्टरका क्लिनिक र ग्यारेन्टी युक्त प्याकेजहरू लिन । तपाईंलाई आज मोटी भनेर रिजेक्ट गर्ने केटाले तपाईं दुई महीनामा दुब्लाएर उसकै अघि पर्नुभयो भने पनि अर्को कमजोरी देखाउने छ । स्वीकारै गरेर बिहे गरेछ भने पनि तपाईंमा कुनै पाठेघर सम्बन्धी डिफेक्ट आएर बच्चा पाउन नसक्ने हुनुभयो भने तपाईंलाई डिभोर्स दिनेछ ।
तर उही श्रीमानको ‘स्पर्म’मा डिफेक्ट देखियो भने अनेक उपाय गरेर तपाईं नै घर बसाउन खोजी राख्नुहुन्छ । यदि तपाईंको कमजोरीलाई आत्मसात् गरेर कसैले प्रेम गर्दैन भने बिहे गरेर पछुताउने काम नगर्नुहोला ।सम्बन्ध आ-आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर म त सर्वस्व उसकै हुँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो भने तपाईंको व्यक्तिगत क्षमतालाई ओझेलमा पारी आफ्नो घमण्डको छाता ओढाउने छन् । एकचोटि कन्फर्म गरेर काटेको टिकट फिर्ता हुन्छ भने अनायासै अन्जानमा लगाएको माया किन फिर्ता हुँदैन ?
ब्वाइफ्रेन्डसँग एकचोटि आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क गरियो भन्दैमा जहिले पनि उसको समय र कामुकताका आधारमा तयार हुनुपर्छ भनेर कहाँ लेख्या छ र ? हाम्रो जीउडाल कुनै फारम जस्तो हो र ? यो छ, यो छैन भन्दै भर्ने अनि मापदण्ड पूरा भए चैं बिहेको कुरो अघि बढाउनलाई ।
केटी हेर्न जाने रे? यो कुरा वाहियात् हो! अनि केटा चैं हेर्नु पर्दैन र? जस्तो भए पनि भयो? केटीलाई हेर्दा केटी श्रृङ्गार गरेर आउनुपर्ने रे! के केटीको जिन्दगी चिरीच्याट्ट पारेर पसलेले बेच्ने गिफ्ट जस्तो हो र? हेर्‍यो- रिजेक्ट गर्यो, फेरि हेर्यो- रिजेक्ट गर्‍यो!बारम्बार सजिएर आउने, चुपचाप बस्ने मन परे ग्राहकले किन्ने नत्र ओल्टाईपल्टाई गरेर कमजोरी देखाएर छोड्ने फेन्सी पसलको डमी जस्तै भएन र नारीको जिन्दगी ! आउनुहोस् सबै मिलेर यी परिपाटीहरूमा रुपान्तरण गरौं। बिहे अघि र पछिको सम्बन्धलाई वस्तुपरक होइन सुमधुर बनाऔं।श्रोत:अनलाइन खबर बाट डा. अच्युत शाली घिमिरेको लेख।
यी हुन् कित्ताकाटमा एकै दिन ५७ लाख घुस लिने नापीका कर्मचारी
यी राशिका व्यक्तिले हातमा रातो रंगको धागो बाँध्न नबिर्सिनुहोस,सँधै मिल्छ लक्ष्मीको कृपा
श्रीमानले भनेको नमान्दा श्रीमातीको यस्तो दय’नीय अवस्था,कृपया मुटु दह्रो बनाएर पढ्नुहोला
बल्ल बाहिरियो गोंगबु प्रकरणको ड’रलाग्दो रहस्य, कल्पना र कृष्ण श्रीमान श्रीमती, यस्तो छ ५० लाख पैसा र ना’ङ्गो भिडियोको खेल, दोहोरीमा काम गर्थिन कल्पना (भिडियो)